पाइलट विजय लामाले लेखे रविन्द्र मिश्रलाई मन छुने पत्र,जुन पत्रले करोडौ नेपालीलाई स्तब्ध बनाइदिन्छ ! « Surya Khabar
काठमाण्डौ । लामो समय बीबीसी नेपाली सेवामा रहेर काम गरेका प्रतिष्ठित पत्रकार रविन्द्र मिश्रले केही दिन अघि नयाँ पार्टी निर्माण गर्ने घोषणा गरेका छन् । नेपाली राजनीतिक रंगमञ्चमा विश्वासिलो राजनीतिक पार्टी र राजनेतहरुको अभाव देखिएको बेला उनले नयाँ राजनीतिक शक्ति निर्माण गर्ने घोषणा गरेका हुन् । मिश्रले नयाँ पार्टीको नाम समेत जुराइसकेका छन् । उनले नयाँ पार्टीको नाम साझा पार्टी जुराएका छन् । मिश्रको नयाँ शक्ति घोषणाको विषयलाई लिएर यसबेला राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा चर्को बहस समेत भैरहेको छ । विभिन्न प्रतिक्रियाहरु समेत आइरहेका छन् ।
सोही सिलसिलामा नेपालका एकजना प्रतिष्ठित व्यक्तित्वले मिश्रलाई पत्र लेखेरै सुझाव दिएका छन् । लामो समय उड्ययन क्षेत्रमा अनुभव सम्हालेका बरिष्ठ पाइलट विजय लामाले मिश्रको कदम र उनको यात्रालाई सुझाव दिँदै निकै मर्मस्पर्शी पत्र लेखेका छन् । यस्तो छ पाइलट लामाले लेखेको पत्र :
तिमीले अहिले सम्म आफ्नो पेशाबाट पुर्याएको योगदानलाई साधुबाद….जहिले सत्य को पक्षमा बोल्यौ, लड्यौ र सकारात्मक सोच लिएर राष्ट्रका लागि समर्पित भएर काम गर्यौ! आफ्नो बिषिष्टअनुभव र बुझेका सांसारिक ज्ञान र निर्दिष्ट तत्वबोधहरु निर्धक्क भएर पस्क्यौ!
तिमी पत्रकारिता मा छउञ्जेल पित-पत्रकारितालाई पैतालाले कुल्चीरह्यौ। तर आज यसरी तिमीले सफलताको गगन गमन गरीरहेको पेशा लाई छोडी अन्यौल्, अब्यवस्थित्, फोहोरी, लुब्ध र अँध्यारो नितान्त भिन्न जगतमा पाइला चाल्ने तिम्रो निर्णयलाई स्वागत गर्दछु,यस कारण कि तिमी जस्तोको खाँचो छ, त्यहाँ जहाँ निस्वार्थ,निश्पक्ष,र निडर Leader को खडेरी छ् !
तिमीले बोल्दै गरेको “खान पुगोस-दिन पुगोस” जस्ता सामन्ती शब्दावली र “भष्टाचारीलाई किरा परोस” खालका दैबिक श्राप भन्दा माथी उठेर “खान नपाउनेलाई खान पुग्ने युग हाम्रो गन्तब्य” र “भ्रष्टाचारी जेलमा सडोस” को संकल्प नयाँ पुस्ताले तिमी बाट अपेक्षा जो गर्छ गरीरहेछ । सच्याउने छौ । यस्ता अर्थहिन नाराले तिम्रो बौद्धिकतालाई गिज्याएको छ ।
आफु भित्र भएको सबै सदगुणलाई ब्यवस्थित गर्दै सुदुरगामी यात्राका लागी मेरो शुभ-कामना र सबै भएर पनि केही नभएको देशलाई मात्र”सबै भएको” देश बनाउने महाँयात्राको थालनी गरीदेउ ।
…………….जय चन्द्र सुर्य…………..
तिम्रो रत्न राज्य कलेजको अध्ययन ताकाको सखा…….
(वरिष्ठ पाइलट बिजय लामाको यो बिचार फेसबुकबाट साभार गरिएको हो )